Actorylọ ọrụ Cast Iron Enamel Casserole - China Cast Iron Enamel Casserole na-emeputa, ndị na-eweta ya
Ihe Ngwaahịa: JTA22, JTA 24 Ihe: Cast Iron Enamel Size: 21.5 * 9 ， 24.5 * 12 Mbukota: igbe 1.Lighter nke nwere enamel mara mma zuru oke maka isi nri na ije ozi. Scratch na-eguzogide, unyi na-eguzogide, na-adịghị egbu egbu, matte ojii enamel ime elu. 2.Sure-adịgide, aka gafere akụkụ aka maka nkasi obi na nkwụsi ike. Ntọala 3.Thicker na -emepụta nkesa ọkụ ka ukwuu. Ihe eji edozi ube 4.Eme ka basting nke ime nye ihe oriri di uto.
Onu Number KAR26 Round Casserole D: 21.5cm 24cm 26cm 28cm Oval Casserole 28x21cm 30x23cm Njirimara igwe anaghị agba nchara na akaghị aka maka akwa njikwa na-acha ọbara ọbara, odo, acha anụnụ anụnụ, pink, nwa, oroma mkpuchi nke enamel mkpuchi 1.Heavy-task enamel mkpuchi 2. Mgbasa ọkụ kachasị elu na njigide 3.Cast iron heats nwayọ nwayọ na ntụgharị 4.Perfect maka nri esi egbu egbu Njirimara: Igwe igwe anaghị agba nchara na akaghị aka maka njikwa dị ukwuu Ebere iko dị elu agaghị emeghachi omume na nha Profa ...
Ihe Number KA3006 Round Casserole D: 27CM / 30CM Atụmatụ igwe anaghị agba nchara na akaghị aka maka akwa njikwa na-acha ọbara ọbara, odo, acha anụnụ anụnụ, pink, nwa, oroma mkpuchi enamel mkpuchi 1.Heavy-task enamel mkpuchi 2.Superior okpomọkụ nkesa na njigide 3 .Cast iron heats nwayọ nwayọ na 4.Mezuazu nke eji esi nri nwayọ Ngwa: igwe anaghị agba nchara na akaghị aka maka njikwa ukwu Ezigbo iko dị n’elu agaghị eme ihe nrịbama Ọkachasị klaasị na - ejigide okpomọkụ na anya…